देश – Page 49 – Radiokathmandu देश – Page 49 – Radiokathmandu
धारीलो हतियार प्रहार गरी फरार
१७ भदौ, धनुषा । पेट्रोलपम्प अगाडी बसिरहेको एक युवामाथि धारीलाे हतियार प्रहार भएकाे छ । धनुषा मिथिला नगरपालिका-९ पिपरा पेट्रोलपम्प अगाडी बसिरहेको सफल श्रेष्ठलाई मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको मन्दिप के.सीले एक्कासी धारीलाे हतियार प्रहार गरेकाे प्रहरीले बताएकाे छ । …
१४० बोतल डाईलेक्स डि.सी. सिरफ सहित एक जना पक्राउ
१७ भदौ, सप्तरी । मोटरसाईकलमा लुकाई छिपाई अबैध रुपमा ल्याउदै गरेको लागूऔषध सहित मानिस पक्राउ परेका छन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीबाट खटिएको प्रहरी टोलिले लुकाई छिपाई अबैध रुपमा ल्याउदै गरेको १४० बोतल डाईलेक्स डि.सी. सिरफ अवैध…
भन्सार छलिका कपडा बारामा बरामद
१७ भदौ, बारा ।अन्दाजि आठ लाख मुल्य बराबरकाे रेडिमेड कपडाहरु भंसार छली चोरी पैठारी गरि नेपाल भित्र्याएको अवस्थामा प्रहरीले बरामद गरेकाे छ । ईलाका प्रहरी कार्यालय निजगढ बाराबाट खटिएको प्रहरी गस्ती टोलीले रेडिमेड कपडाहरु बरामद गरेकाे हाे…
धारिलो हतियार प्रहार गरी स्याङ्जामा बावु छोराको हत्या
१७ भदौ, काठमाडौं । धारिलो हतियार प्रहार गरी स्याङ्जामा बावु छोराको हत्या भएको छ । हरिनास गाउँपालिका– ३का ३० वर्षीय चित्रबहादुर खड्का र उनका छोरा ४ वर्षीय रिजनको हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ । सोमबार राति…
मोटरसाईकलको ठक्करबाट धरानमा एक जनाको मृत्यु
१७ भदौ, सुनसरी । सुनसरीको धरान उप-महानगरपालिका-१८ लाङघाली चोकमा सोमवार भएको मोटरसाईकलको ठक्करबाट ६९ बर्षीय बृद्धको मृत्यु भएको छ । दिउँसो सवा १ बजेको समयमा दक्षिणबाट उत्तर तर्फ जाँदै गरेको को १४ प १२०३ नम्बरको…
१६ भदौ, काठमाडौं । प्राचीन अनुवाद एकमातृ गुरु संघ, नेपालको पहिलो अधिवेशन तथा दोस्रो साधारणसभा आइतबार बौद्ध तामाङ कल्याण गुठी फुलबारीमा एक कार्यक्रमकाबीच सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनले नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ ।…
अपहरणमा परेकाे बालककाे सकुसल उद्दार, अपहरणकारी पक्रउ
१५ भदौ, रौतहट । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले अपहरणमा परेकाे बालककाे सकुसल उद्दार गरेकाे छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले बालकलाइ अपहरण गरि भारत लैजाने क्रममा नेपाल भारत सिमाबाट अपहरणकारी पक्राउ गरेकाे हाे । प्रहरीका…
भोजपुरमा पहिरोले पुरेर एक जनाको मृत्यु
१५ भदौ, काठमाडौं । भोजपुरको साल्पासिलिचो गाउँपालिका-६ थुमलुङ बस्ने ६५ बर्षीय मान बहादुर बिष्टको पहिरोले पुरेर मृत्यु भएको छ । शनिवार घर नजिकै रहेको अलैची बगानमा अलैची गोड्ने क्रममा एक्कासी आएको पहिरोले पुरेर घाईते भएका …
५ के.जि. गाँजासहित मकवानपुरमा एक जना पक्राउ
१३ भदौ, मकवानपुर । गाँजासहित मकवानपुरमा एक जना पक्राउ परेका छन । पक्राउ पर्नेमा मकवानपुर मनहरी गाँउपालीकाका बिर बहादुर दोङ रहेकाे छन । ईलाका प्रहरी कार्यालय नेवारपानी मकवानपुरका अनुसार उनलाइ ५ के.जि. ४०० ग्रामसहित नेवारपानी स्थित सडक…
८३ केजी रक्तचन्दन र १ सय ५० ग्राम यार्सागुम्बा सहित २ जना पक्राउ
१२ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौंमा रक्तचन्दन तथा यार्सागुम्बा सहित २ जना पक्राउ परेका छन । काठमाडौं महानगरपालिका-६ रामहिटी चारघरेबाट ८३ केजी रक्तचन्दन र १ सय ५० ग्राम तौल भएको यार्सागुम्बा सहित २ जनालाई बुधबार साँझ प्रहरीले…